चीन-अमेरिका घम्साघम्सीमा क्यानाडालाई सकस ! यस्तो छ मेङ गिरफ्तारीको भित्री कुरो - Everest Dainik - News from Nepal
चीन-अमेरिका घम्साघम्सीमा क्यानाडालाई सकस ! यस्तो छ मेङ गिरफ्तारीको भित्री कुरो
बेईजिङ, मङ्सिर २३। चीनले हुवावे कम्पनीकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी क्यानाडामा गिरफ्तार गरिएपछि क्यानाडेली राजदूत मार्फत आफ्नो औपचारिक विरोह व्यक्त गरेको छ । चीनका लागि क्यानाडेली राजदूत जोन म्याक्लमलाई बोलाएर चीनका उप-विदेशमन्त्री ले युचेङले उक्त कार्य “अतार्किक, लज्जास्पद र नीच” प्रकृतिको भएको भन्दै विरोध जनाएको र यसको परिणाम ‘गम्भीर’ हुन सक्ने चेतावनी दिएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा जारी सूचनालाई आधार मान्दै सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
स्यामसङ पछिको दोस्रो ठुलो स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी मेङ वाङझूलाई क्यानाडाको भ्याङकुभरमा गत डिसेम्बर १ तारेखमा गिरफ्तार गरिएको हो ।
उनलाई अमेरिकाको आग्रहमा गिरफ्तार गरिएको बताइएको छ । उनी विरुद्ध अमेरिकामा वित्तीय संस्थाहरूसँग धोखाधडी गरेको आरोप लागेको छ । उनलाई अमेरिका प्रत्यर्पण गरिएको खण्डमा अमेरिकी कानुन अनुसार उनलाई ३० वर्षसम्मको सजाय हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
अमेरिकी वकीलहरूले मेङले इरानका कम्पनीहरूसँग आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई गोप्य राखेको आरोप लगाएका छन् । यसले हाल अमेरिकाले इरानविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घन गरिएको मानिने बताइएको छ । यस मुद्दामा मेङमाथि षड्यन्त्रपूर्वक वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध धोखाधडी गरेको आरोप लगाइने बताइएको छ ।
को हुन् मेङ?
हुवावे कम्पनीमा रिसेप्सनिस्टबाट आफ्नो क्यारियरको सुरुवात गर्ने ४६ वर्षीय मेङ वाङझू हुवावे कम्पनीका अध्यक्ष रेन झेङफेईकी छोरी हुन् । यसका साथै उनी यस कम्पनीकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी छिन् । झेङफेई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ निकट मानिन्छन् । उनले २० वर्ष जनमुक्ति सेनाको प्रविधि विभागमा काम गरेपछि सन् १९८७ मा हुवावेको स्थापना गरेका थिए । मेङलाई उनको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिने गरेको छ ।
हुवावे विश्वको सबैभन्दा ठुलो टेलिकम्युनिकेसन उपकरण निर्यातकर्ता कम्पनी हो । यसले सन् २०१२ मा स्विडिस कम्पनी इरिक्सनलाई उछिन्दै उक्त स्थान हासिल गरेको थियो । सन् २०१८ मा आएर यो कम्पनी एप्पललाई उछिन्दै संसारको दोस्रो ठुलो स्मार्टफोन कम्पनी बनेको थियो । विश्वका ५० सबै भन्दा ठुला मोबाइल सेवा प्रदायकमध्ये ४५ ले हुवावेका उपकरण प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
सुरुमा लुकाइयो उनको गिरफ्तारी
मेङलाई डिसेम्बर १ तारेखमै क्यानाडाको पश्चिम तटीय सहर भ्याङकुभरबाट गिरफ्तार गरिएको भए पनि उनलाई बिहिबारमात्र यो समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले उनको गिरफ्तारीबारे अमेरिका अनभिज्ञ रहेको जनाए पनि हुवावेले भने यो केही मिनेटमै लिइएको फैसला नभएको बताएको छ । कम्पनीले उनी विरुद्ध क्यानाडामा पनि २२ अगस्तमै पक्राउ पुर्जी जारी भएको जनाएको छ । यस कुराको खुलासा शुक्रबार उनलाई जमानतमा छुटाउन भएको बहसमा खुल्न आएको थियो । चीनले मेङलाई भ्याङकुभरमा उडान स्थानान्तरण गर्ने क्रममा गिरफ्तार गरिएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विरुद्ध रहेको जनाएको छ ।
चीन-अमेरिका सम्बन्ध खल्बलिने सम्भावना
बिबिसीका अनुसार चीनले हुवावेका माध्यमले प्रविधिका लागि पश्चिमा देशहरूप्रति आफ्नो निर्भरता लगभग समाप्त पारिसकेको छ । त्यसैले यस परिघटनालाई चीनले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा बुझ्न सक्ने चीन-अमेरिका जानकारहरूको भनाइ रहेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै जी-२० बैठकमा दुई देशबीच जारी व्यापार युद्ध ९० दिनका लागि रोक्ने सम्झौता भएको थियो । यस गिरफ्तारीलाई चीनले अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध: चिनियाँ प्रविधि प्रतिबन्धित गर्न ट्रम्पले ल्याए कानुन
अर्जेन्टिनामा भएको उक्त बैठकमा दुई देशका राष्ट्रपतिहरू बीच महत्वपूर्ण सहमति भैरहँदा क्यानाडामा मेङको गिरफ्तारी भएको थियो । चीनले यस घटनाप्रति औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाउँदै उनको रिहाईको माग गरेको छ ।
हुवावे, चीन र पश्चिमा चिन्ता
हाल चीन र अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा आमुन्ने सामुन्ने देखिएका छन् । यो पैठाजोरी विशेष गरेर व्यापार र प्रविधिको क्षेत्रमा देखा परेको छ । अमेरिका आफ्ना युरोपेली साझेदारहरूलाई बारम्बार विश्व मंचबाट चीनलाई एक्ल्याउन दवाब दिइरहेको छ । यस्तोमा अमेरिकी प्रतिबन्ध झेलिरहेको इरानसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर चीनलाई घेर्ने राम्रो मौका अमेरिकाले छुटाउन चाहन्न ।
उता हुवावेलाई चीनले पनि महत्वका साथ लिने गरेको छ । उसले निकट भविष्यमै विश्वकै पहिलो फाइभ- जी नेटवर्क संचालनमा ल्याउने भएको छ । यसमा हुवावे प्राविधिक साझेदारको रूपमा रहेको छ । पश्चिमाहरू यसले चीनलाई पश्चिमी गोप्य सूचनासम्म पहुँच पुऱ्याउन सजिलो भएर उसको गुप्तचर क्षमता सशक्त हुने डर सताइरहेको छ ।
चीनले २०१६ मै क्वान्टम स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा स्थापित गरिसकेको छ । यसलाई सुचनाको प्रशोधनमा क्वान्टम प्रविधिको प्रयोगमा उसलाई सक्षमता प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसो भएको सम्बन्धमा चिनियाँ गोप्य सुचनाहरू डिकोड गर्न हाल उपलब्ध प्रविधिबाट सम्भव हुने छैन । यसो भएको खण्डमा चीन गुप्तचरीको दृष्टिले झनै शक्तिशाली बन्ने डर समेत अमेरिकालाई रहेको छ ।
धेरैले यस कम्पनीको सम्बन्ध चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग रहेकाले यसले विभिन्न देशका सूचना चिनियाँ सेनालाई उपलब्ध गराउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । हालै मात्र अमेरिका, ब्रिटेन लगायतका देशहरूले हुवावेमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको सेनाको संलग्नता बारे स्पष्टता नरहेको भन्दै आफ्नो देशमा फाइभ- जी परियोजनाहरूमा टेन्डर हाल्न यस कम्पनीलाई प्रतिबन्धित समेत गरेका छन् ।
के छ क्यानाडाको प्रतिक्रिया?
क्यानाडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोका पूर्व विदेश मामिला सल्लाहकार रोल्याण्ड पेरिसका अनुसार चिनियाँ सरकारको यस्तो दवाब काम नलाग्ने बताउँछन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् “सम्भवतः चीनमा अदालतहरू सरकारका मातहत रहेका हुनाले बेईजिङलाई कानुनी राज्य भएका देशमा अदालतहरू स्वतन्त्र हुने गर्दछन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन सक्छ । क्यानाडा सरकारमाथि दवाब दिनुको कुनै अर्थ छैन, अदालतले नै यसको फैसला गर्नेछ ।
क्यानाडाका अधिकारीहरूले भने यस सम्बन्धमा कुनै पनि प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले न्यायालयको स्वतान्त्रता र चीन-क्यानाडा सम्बन्ध दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । विदेशमन्त्री क्रिस्टिया फ्रील्याण्डले क्यानडाले सबै कुरा प्रक्रिया सङ्गत ढङ्गले हुने र मेङसम्म चीनका कन्सुलरको पहुँचको सुविधा दिइने कुरामा चीनलाई आश्वस्त पारेको बताइन् ।
“हामी कानुनको शासनमा विश्वास गर्छौँ र यस मामिलामा पनि हामी कानुनको पालन गर्नेछौं” उनले भनिन् ।
ट्याग्स: Huawei, US-China trade war